Wasiirka Maaliyadda ee dowladda KMG ah oo sheegay inay 3.5 milyan dollar ka maqan tahay qasnadda dowladda
Wasiirka Maaliyadda ee dowladda KMG ah, Sayid Axmed Sheekh Daahir ayaa maanta u sheegay Golaha Baarlamaanka KMG ah war cusub oo naxdin leh oo sheegaya in qasnadda Wasaaradda Maaliyadda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa 3.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
Waxa uu sheegay Wasiirku in hal milyan oo lacagtaas ka mid ah uu jeeg ahaan uga qaatay Ra'iisal Wasaaraha dowladda KMG ah, Cali Khaliif Galayr. "Milyan iyo bar kalena waxaa iga saxiixday Guddoomiyaha Bankiga Dhexe" ayuu yiri Sayid Axmed Sheekh Daahir.
Wasiirka Maaliyaddu, waxa uu sheegay inaysan sharciga waafaqsanayn qaabka lacagahaasi ku bexeen. "Waxaan isku dayey inaan hor istaago, waanse awoodi kari waayey. Waxaa kaloo iga maqan 225,000 oo dollar oo Baarlamaanka aan u saxiixay" ayuu yiri.
Golaha Baarlamaanka gudihiisa ayay arrintani saakay ka dhalisay dood kulul oo lagu sigtay in laysu gacan qaado. Buuqii Baarlamaanka oo maalmahaanba circa ku dhegganaa ayaa sii kordhay.
"Meesha fadeexad xun ayaa ka dhacay, waa nasiib darro nagu wada dhacday" ayuu yiri Xildhibaan ka mid ah xildhibaannada Golaha Baarlamaanka. Waxa ay xildhibaannadu ku dhaleeceeyeen dowladda inay ka caga jiidaysay beryahanba inay runta qeexdo.
Xildhibaan Faarax Xasan oo ka tirsan Baarlamanka ayaa sheegay in Madaxweynaha Indoniisiya uu Baarlamanka dalkiisu ku haysto lacag gaaraysa hal milyan oo dollar, "halkanna, waxaa maqan lacag ku dhow afar milyan oo dollar" ayuu yiri.
Xildhibaan Sahra Jaamac Qoorsheel ayaa ku baaqday kulan degdeg ah. "Waa war naxdin leh warka uu noo sheegay Wasiirka Maaliyadda" ayay tiri iyadoo hadal dheer ka jeedisay Golaha.
Maalinta berri ah ayuu Goluhu isugu imaan doonaa kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn. Kal fadhiga Baarlamanka oo la filayey in la soo xiro toddobaadkii tagay ayaa la uta dheereeyey arintan awgeed